Dowladda Soomaaliya oo dib uga noqotay qoraal ay kasoo saartay colaada Itoobiya | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Dowladda Soomaaliya oo dib uga noqotay qoraal ay kasoo saartay colaada Itoobiya
Dowladda Soomaaliya oo dib uga noqotay qoraal ay kasoo saartay colaada Itoobiya
Wasaaradda arimaha dibada Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka noqotay qoraal ay kaga hadashay dagaalka in ka badan labo asbuuc ka socda gobolka Tigeeraga ee Waqooyiga dalka Itoobiya.
Wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya ayaa baraheeda bulshadda waxa ay ka saartey war-saxaafadeed ku qoran luuqadd English oo ay kaga hadashay dagaalka u dhexeeya Xikumadda Abiy Axmed iyo maamulka Tigreega.
Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka, ayaa ku shaaciyay in qoraalkaas uusan ka turjumeyn mowqifka saxda ah ee dowladda uu hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
“Waxaan rabaa in aan caddeeyo in war-saxaafadeedka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee khuseeya xaaladda Itoobiya in uusan ahayn mid rasmi ah. Qodobadda ku qoran war-saxaafadeedka kama turjumayo aragtida saxda ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, mana ahan mid sax ah”. ayuu yiri wasiir Cawad.
Ma cadda sababta dhabta ah ee keentay in dowladda Soomaaliya ay ka laabato mowqifkeeda iyo qaabka uu markii hore kusoo baxay warka qoraalka.
Qoraalkii hore ay usoo saartay Dowladda Soomaaliya gaar ahaan Wasaaradda Arimaha dibadda ayaa markii sidaan u qornaa: